Music – Alpha Premium
Metal Lords (2022) ##unicode Metal Lordsဇာတ်ကားမှာတော့ Kevin ဟာ Metalဂီတကို အရူးအမူးစွဲလန်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းHunterကြောင့် Skullfuckerဆိုတဲ့ တီးဝိုင်းကို နှစ်ယောက်သားဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Kevinက Hunterကြောင့်သာ Metalဂီတကိုသိလာရသူဖြစ်ပြီးတော့ Hunterလောက် Metalဂီတကို မစွဲလန်းဘဲ ပုံမှန်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကို ဖြတ်သန်းချင်သူပေါ့။ တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့ကျောင်းမှာ တီးဝိုင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပတဲ့အတွက် Hunterက သူတို့Skullfuckerတီးဝိုင်းကို ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Kevinတစ်ယောက်ဟာ ‌ဘင်ခရာအဖွဲ့ထဲက ကောင်မလေးနဲ့ သဘောကျနေတာဘဲဖြစ်တယ်။ပြိုင်ပွဲမှာဘဲ အာရုံစိုက်စေချင်တဲ့ Hunterနဲ့ ရည်းစားရနေတဲ့ Kevinတို့ သူငယ်ချင်းတိုနှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးရော အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုပါအုံး။ ##zawgyi Metal Lordsဇာတ္ကားမွာေတာ့ Kevin ဟာ Metalဂီတကို အ႐ူးအမူးစြဲလန္းေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းHunterေၾကာင့္ Skullfuckerဆိုတဲ့ တီးဝိုင္းကို ႏွစ္ေယာက္သားဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Kevinက Hunterေၾကာင့္သာ Metalဂီတကိုသိလာရသူျဖစ္ၿပီးေတာ့ Hunterေလာက္ Metalဂီတကို မစြဲလန္းဘဲ ပုံမွန္အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ကို ျဖတ္သန္းခ်င္သူေပါ့။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူတို႔ေက်ာင္းမွာ တီးဝိုင္းၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုက်င္းပတဲ့အတြက္ Hunterက သူတို႔Skullfuckerတီးဝိုင္းကို ၿပိဳင္ပြဲမွာအႏိုင္ရဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့တယ္။တစ္ဖက္မွာေတာ့ Kevinတစ္ေယာက္ဟာ ‌ဘင္ခရာအဖြဲ႕ထဲက ေကာင္မေလးနဲ႔ သေဘာက်ေနတာဘဲျဖစ္တယ္။ၿပိဳင္ပြဲမွာဘဲ အာ႐ုံစိုက္ေစခ်င္တဲ့ Hunterနဲ႔ ရည္းစားရေနတဲ့ Kevinတို႔ သူငယ္ခ်င္းတိုႏွစ္ေယာက္ၾကားက ဆက္ဆံေရးေရာ အဆင္ေျပပါ့မလားဆိုတာ ၾကည့္ရႈပါအုံး။ Review – ...
Indak (2019) (App member only) ##unicode ဖိလစ်ပိုင်မင်းသမီးချော Nadine Lustre (Never Not Love You/This Time/ ..etc) ရဲ့အကဇာတ်ကားတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ Philipino Musical ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Jenဆိုတဲ့ကောင်မလေးက အမေနဲ့မောင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ Bartayanဆိုတဲ့ကျွန်းလေးမှာ အတူနေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်။တစ်နေ့မှာတော့ Manilaက Indakအကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Vinဟာ Jenလှေပေါ်မှာကနေတဲ့ ဗီဒီယိုကိုမြင်ပြီးတော့ သူတို့အဖွဲ့မှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။Indakအဖွဲ့က Koreaက အကပြိုင်ပွဲမှာသွားပြိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အတွက် Jenကို သူတို့နဲ့အတူလိုက်လာဖို့ Vinက ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။အတိတ်ကဖြစ်ရပ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ Jenဟာ အမေရဲ့အားပေးမှုကြောင့် သူ့မအိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ Vinနဲ့အတူ Manilaကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်းသေးသေးလေးမှာဘဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့ Jenတစ်ယောက် Manilaမြို့ကြီးမှာ တစ်ယောက်တည်းအဆင်ပြေပါ့မလား။ သူမရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ရပြီး သူမအိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါ့မလား။ Vinတို့ Indakအဖွဲ့လးရော ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi ဖိလစ္ပိုင္မင္းသမီးေခ်ာ Nadine Lustre (Never Not Love You/This Time/ ..etc) ရဲ႕အကဇာတ္ကားတစ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ Philipino Musical ဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ Jenဆိုတဲ့ေကာင္မေလးက အေမနဲ႔ေမာင္ျဖစ္သူနဲ႔အတူ Bartayanဆိုတဲ့ကြၽန္းေလးမွာ အတူေနထိုင္ေနတာျဖစ္တယ္။တစ္ေန႔မွာေတာ့ Manilaက Indakအကအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Vinဟာ Jenေလွေပၚမွာကေနတဲ့ ဗီဒီယိုကိုျမင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔အဖြဲ႕မွာပါ၀င္ဖို႔ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။Indakအဖြဲ႕က ...
Waah Zindagi (2021) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အိန္ဒိယဟာသကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့အာရှော့ဟာဆိုရင်ငယ်စဉ်ကတည်းကကံဆိုးတဲ့သူလို့တစ်ရွာလုံးက သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမွေးတဲ့အချိန်ကစပြီး ရွာမှာကန်တွေချောင်းတွေခန်းကုန်ပြီး မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရလို့ပါ နောက်ဆုံးအဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ပဲမြို့ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးရွာအတွက်ရေတွင်းတူးနိုင်မှပြန်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် အာရှော့တစ်ယောက်ရေပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှသာသူငယ်ငယ်တုန်းကစေ့စပ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးရီနာကို လက်ထပ်နိုင်မှာဖြစ်ဖို့အတွက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံအများကြီးရှာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူပါ ဒါပေမယ့်ဉာဏ်အရမ်းမထက်တဲ့အာရှော့အတွက် တော့စာမေးပွဲအောင်ဖို့ကတောင်အရမ်းကိုခက်ခဲနေပါတော့တယ် အာရှော့တစ်ယောက်သူ့ရဲ့ အိပ်မက်အတွက်အလုပ်ပေါင်းစုံလုပ်ခဲ့ပြီးတစ်ခုမှလည်းအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး နောက်ဆုံးအာရှော့တစ်ယောက်သူ့ကိုယ်သူအရမ်းကံဆိုးနေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံချင်လာပါတော့တယ် အာရှော့တစ်ယောက်သူ့ရဲ့ကံဆိုးမှုကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မှာလား သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအောင်မြင်ပြီးချစ်ရသူရီနာနဲ့လက်ထပ်နိုင်သွားမလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့အိႏၵိယဟာသကားေလးတစ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့အာေရွာ့ဟာဆိုရင္ငယ္စဥ္ကတည္းကကံဆိုးတဲ့သူလို႔တစ္႐ြာလုံးက သတ္မွတ္ျခင္းခံရတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့သူေမြးတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ႐ြာမွာကန္ေတြေခ်ာင္းေတြခန္းကုန္ၿပီး မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းျပႆနာကိုႀကဳံေတြ႕ရလို႔ပါ ေနာက္ဆုံးအဲ့ဒီျပႆနာေၾကာင့္ပဲၿမိဳ႕ကိုထြက္လာခဲ့ၿပီး႐ြာအတြက္ေရတြင္းတူးႏိုင္မွျပန္မယ္ဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ အာေရွာ့တစ္ေယာက္ေရျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္မွသာသူငယ္ငယ္တုန္းကေစ့စပ္ခဲ့တဲ့ေကာင္မေလးရီနာကို လက္ထပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ဖို႔အတြက္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးရွာႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့သူပါ ဒါေပမယ့္ဉာဏ္အရမ္းမထက္တဲ့အာေရွာ့အတြက္ ေတာ့စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ကေတာင္အရမ္းကိုခက္ခဲေနပါေတာ့တယ္ အာေရွာ့တစ္ေယာက္သူ႔ရဲ႕ အိပ္မက္အတြက္အလုပ္ေပါင္းစုံလုပ္ခဲ့ၿပီးတစ္ခုမွလည္းအဆင္မေျပခဲ့ပါဘူး ေနာက္ဆုံးအာေရွာ့တစ္ေယာက္သူ႔ကိုယ္သူအရမ္းကံဆိုးေနတယ္ဆိုတာကိုလက္ခံခ်င္လာပါေတာ့တယ္ အာေရွာ့တစ္ေယာက္သူ႔ရဲ႕ကံဆိုးမႈကိုေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မွာလား သူ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းေအာင္ျမင္ၿပီးခ်စ္ရသူရီနာနဲ႔လက္ထပ္ႏိုင္သြားမလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Comedy,Drama,Musical Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
Little Big Mouth (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီတစ်ခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် အချစ်ဟာသဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် တီးဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲမှာ အရက်မူးပြီးပြဿနာရှာမိလို့ အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခန်းကနှင်ချခံခဲ့ရတဲ့ ဂစ်တာသမား စီရာဟာ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှူး မယ်လ်နဲ့ဆုံခဲ့မိပါတယ် မတော်တဆ စီရာ လျှပ်စစ်ရှော့တိုက်ခံခဲ့ရပြီး မယ်လ်က စီရာကိုသနားလို့ သူ့အိမ်ကိုခေါ်ပြီးဆေးကုပေးခဲ့ပါတယ် မယ်လ်ဟာ သားတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တည်းထိန်းကျောင်းနေတဲ့မိခင်ဖြစ်ပြီး လောင်းကစားသမား သူမရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုလည်း အိမ်မှာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိန်းကလေးပါ မယ်လ်နဲ့ စီရာကြိုက်သွားမှာကိုစိုးပြီး သူတို့က စီရာကို မကြည်ကြပါဘူး မယ်လ်ကလည်း သူတို့ကိုအရွှဲ့တိုက်ပြီး စီရာကို အိမ်မှာနေခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ မယ်လ်နဲ့စီရာကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရူရမှာပါ အရည်အချင်းရှိတဲ့ဂီတသမား စီရာရဲ့အနုပညာခရီးလမ်းမှာ မယ်လ်က ဘယ်လိုပံ့ပိုးမှုတွေပေးမလဲ စီရာကိုအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်အောင် ဘယ်လိုအားပေးမလဲဆိုတာပုံဖော်ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးလည်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ခါ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ၾကည့္လို႔ေကာင္းမယ့္ အခ်စ္ဟာသဇာတ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ တီးဝိုင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ အရက္မူးၿပီးျပႆနာရွာမိလို႔ အဖြဲ႕ရဲ႕တိုက္ခန္းကႏွင္ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဂစ္တာသမား စီရာဟာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မႉး မယ္လ္နဲ႔ဆုံခဲ့မိပါတယ္ မေတာ္တဆ စီရာ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့တိုက္ခံခဲ့ရၿပီး မယ္လ္က စီရာကိုသနားလို႔ သူ႔အိမ္ကိုေခၚၿပီးေဆးကုေပးခဲ့ပါတယ္ မယ္လ္ဟာ သားတစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္တည္းထိန္းေက်ာင္းေနတဲ့မိခင္ျဖစ္ၿပီး ေလာင္းကစားသမား သူမရဲ႕အေဖျဖစ္သူကိုလည္း အိမ္မွာေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့မိန္းကေလးပါ မယ္လ္နဲ႔ စီရာႀကိဳက္သြားမွာကိုစိုးၿပီး သူတို႔က စီရာကို မၾကည္ၾကပါဘူး မယ္လ္ကလည္း ...
The J Team (2021) (App member only) ##uniucode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ အမေရိကန်ဇာတ်ကားမှာတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ Morgan Freeman၊ Christopher Walken နဲ့ William H. Macyတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ချားစ်၊ ရော်ဂျာနဲ့ ဂျော့ဂျ်က ပြတိုက်ကလုံခြုံရေးအစောင့်တွေပါ သူတို့၃ယောက်လုံးရဲ့ တူညီတဲ့အချက်တော့ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုစီကို ကိုယ်စီစွဲလမ်းနေတာပါပဲ ချားစ်နဲ့ရော်ဂျာက ပန်းချီကားနှစ်ချပ်ကို အလွန်နှစ်သက်နေပြီး ဂျော့ဂျ်ကတော့ ရုပ်တုကိုအင်မတန်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့ ပြတိုက်ထဲက အနုပညာလက်ရာတွေကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကပြခန်းကိုရွှေ့ပြောင်းမယ်လို့ ပြတိုက်မှူးကကြော်ငြာခဲ့ပါတယ် နွေခေါင်ခေါင် မိုးကြိုးပစ်ခံရသလိုဖြစ်သွားတဲ့ သူတို့၃ယောက် ကြံရာမရတော့ဘဲ သူတို့ချစ်တဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကို အစစ်နဲ့အတုလဲပြီး ခိုးယူထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် သူတို့တွေ ဒီအကြံအစည်ကို ဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲ အကောင်ထည်ဖော်ကြမလဲဆိုတာ အလွဲလေးတွေရောပြီးရိုက်ပြထားလို့ ရယ်လည်းရယ်ရပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့လည်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ အေမရိကန္ဇာတ္ကားမွာေတာ့ နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္၃ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Morgan Freeman၊ Christopher Walken နဲ႔ William H. Macyတို႔ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ခ်ားစ္၊ ေရာ္ဂ်ာနဲ႔ ေဂ်ာ့ဂ်္က ျပတိုက္ကလုံၿခဳံေရးအေစာင့္ေတြပါ သူတို႔၃ေယာက္လုံးရဲ႕ တူညီတဲ့အခ်က္ေတာ့ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုစီကို ကိုယ္စီစြဲလမ္းေနတာပါပဲ ခ်ားစ္နဲ႔ေရာ္ဂ်ာက ပန္းခ်ီကားႏွစ္ခ်ပ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္ေနၿပီး ေဂ်ာ့ဂ်္ကေတာ့ ...
Annette (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီတစ်ခါကတော့ ဇာတ်လမ်းပုံစံဆန်းဆန်းလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဘာလို့ဆန်းလဲဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လုံးနီးပါးကို သီချင်းတွေနဲ့ချည်းပဲ ပုံဖော်ထားလို့ပါ။ ပုံမှန်ဇာတ်လမ်းပုံစံတွေကနေ ကွဲထွက်နေပြီးတော့ ကြည့်ရတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို ကြည့်ပြီးရင်လည်း အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ကျန်ခဲ့မယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဟင်နရီက တစ်ကိုယ်တော် လူရွှင်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရှိုးပွဲတွေဟာလည်း အရမ်းကိုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကောင်မလေးကတော့ ကမ္ဘာကျော်အော်ပရာအဆိုတော် အန်းဖြစ်ပါတယ်။ အန်းကလည်း အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်ဆိုတော့ သူတို့အတွဲဟာ နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်ညီပြီး လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရတဲ့ အတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ရဲ့သမီးဦးလေးဖြစ်တဲ့ ပဟေဠိဆန်တဲ့အန်းနက်ကို မွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကြီးစုံတွဲကြားမှာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာမှာလဲ၊ အန်းနက်ကရော ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတာလဲ ဆိုတာတွေကိုတော့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါကေတာ့ ဇာတ္လမ္းပုံစံဆန္းဆန္းေလးတစ္ပုဒ္ကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ဘာလို႔ဆန္းလဲဆိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္လုံးနီးပါးကို သီခ်င္းေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲ ပုံေဖာ္ထားလို႔ပါ။ ပုံမွန္ဇာတ္လမ္းပုံစံေတြကေန ကြဲထြက္ေနၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရတာလည္းစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသလို ၾကည့္ၿပီးရင္လည္း အေတြးေပါင္းစုံနဲ႔က်န္ခဲ့မယ့္ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေလးပါ။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဟင္နရီက တစ္ကိုယ္ေတာ္ လူ႐ႊင္ေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရႈိးပြဲေတြဟာလည္း အရမ္းကိုေအာင္ျမင္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေကာင္မေလးကေတာ့ ကမာၻေက်ာ္ေအာ္ပရာအဆိုေတာ္ အန္းျဖစ္ပါတယ္။ အန္းကလည္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ဆိုေတာ့ သူတို႔အတြဲဟာ ေနနဲ႔လ၊ ...
Spin (2021) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Disney ရဲ့ကားသစ်လေးဖြစ်တဲ့ Spinဆိုတဲ့ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးဟာပထမဆုံး Disney Channel ရဲ့အိန္ဒိယအမေရိကန်မိသားစုကိုအသားပေးပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးပါ အိန္ဒိယ အမေရိကန်လူမျိုး Avantika Vandanapu ကအဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ရီယာဟာမိသားစုစားသောက်ဆိုင်လေးမှာအဖေ အဘွား မောင်လေးနဲ့ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ သူ့ရဲ့ဝါသနာ စိတ်ဝင်စားမှုအားလုံးက သူ့ရဲ့မိသားစုစားသောက်ဆိုင်လေးအတွက်ပဲပုံပေးထားတာပါ တစ်နေ့မှာတော့ဒီဂျေကောင်လေးမက်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားရာကနေစပြီး သူ့ဘဝမှာမထင်မှတ်ထားဘဲ ဂီတအနုပညာဘက်မှာပါရမီပါတာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ ရီယာရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာမှာလဲဆိုတာကိုဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် လူငယ်ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစိတ်အပန်းပြေဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်း လေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Disney ရဲ႕ကားသစ္ေလးျဖစ္တဲ့ Spinဆိုတဲ့ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီကားေလးဟာပထမဆုံး Disney Channel ရဲ႕အိႏၵိယအေမရိကန္မိသားစုကိုအသားေပးၿပီး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ကားေလးပါ အိႏၵိယ အေမရိကန္လူမ်ိဳး Avantika Vandanapu ကအဓိကဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ပါဝင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ရီယာဟာမိသားစုစားေသာက္ဆိုင္ေလးမွာအေဖ အဘြား ေမာင္ေလးနဲ႔ဘဝကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖတ္သန္းေနတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ပါ သူ႔ရဲ႕ဝါသနာ စိတ္ဝင္စားမႈအားလုံးက သူ႔ရဲ႕မိသားစုစားေသာက္ဆိုင္ေလးအတြက္ပဲပုံေပးထားတာပါ တစ္ေန႔မွာေတာ့ဒီေဂ်ေကာင္ေလးမက္စ္ကိုစိတ္ဝင္စားရာကေနစၿပီး သူ႔ဘဝမွာမထင္မွတ္ထားဘဲ ဂီတအႏုပညာဘက္မွာပါရမီပါတာကိုေတြ႕ရွိလိုက္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ရီယာရဲ႕ဘဝမွာဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာမွာလဲဆိုတာကိုဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ လူငယ္ဆန္ဆန္႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစိတ္အပန္းေျပဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္း ေလးတစ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB,2.8GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Music,Comedy,Family Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow
CODA (2021) ##unicode ကိုယ့်မိသားစုထဲကမှာ ကိုယ်ကတစ်ဦးတည်းကွဲထွက်နေသလိုဖြစ်နေဖူးလား။ ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါရာ၊ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့အရာတစ်ခုက သူတို့လုံးဝကိုနားမလည်နိုင်တာမျိုးဖြစ်နေဖူးလား။ ဒီလိုမျိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရူဘီအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ ရူဘီက နားမကြားတဲ့သူ့မိသားစုထဲမှာ နားကြားနိုင်တဲ့တစ်ဦးတည်းသောသူပါ။ သူတို့မိသားစုလေးကတော့ ငါးဖမ်းပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်တဲ့ တံငါသည်မိသားစုလေးပေါ့။ ရူဘီက ကျောင်းမသွားခင် သူ့အဖေ၊ အစ်ကိုနဲ့အတူတူ ငါးဖမ်းထွက်ရပါတယ်။ သူက မိသားစုရဲ့စကားပြန်လည်းဖြစ်တော့ မိဘတွေကသူ့ကိုအားကိုးကြတာပေါ့။ ရူဘီအထက်တန်းရောက်တော့ တေးဆိုအဖွဲ့တစ်ခုထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ရူဘီရဲ့အသံချိုချိုလေးနဲ့ပါရမီကို သတိပြုမိတဲ့ဆရာက သူ့ကိုသေချာလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ရူဘီဟာ သူ့မိသားစုတွေနားမလည်နိုင်တဲ့၊ ခံစားလို့မရတဲ့ သီချင်းဆိုတာကို အရမ်းစွဲလမ်းသဘောကျသွားပါတယ်။ ရူဘီတစ်ယောက် သူနဲ့မိသားစုကြားကကွာဟချက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး သူဝါသနာပါရာ သီချင်းဆိုတာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို သီချင်းချိုချိုအေးအေးလေးတွေပါ နားဆင်ရင်းခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။ ##zawgyi ကိုယ့္မိသားစုထဲကမွာ ကိုယ္ကတစ္ဦးတည္းကြဲထြက္ေနသလိုျဖစ္ေနဖူးလား။ ကိုယ့္ရဲ႕ဝါသနာပါရာ၊ ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရတဲ့အရာတစ္ခုက သူတို႔လုံးဝကိုနားမလည္ႏိုင္တာမ်ိဳးျဖစ္ေနဖူးလား။ ဒီလိုမ်ိဳႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ႐ူဘီအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္လမ္းေလးကို တင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္။ ဇာတ္လမ္းပုံစံေလးကေတာ့ ႐ူဘီက နားမၾကားတဲ့သူ႔မိသားစုထဲမွာ နားၾကားႏိုင္တဲ့တစ္ဦးတည္းေသာသူပါ။ သူတို႔မိသားစုေလးကေတာ့ ငါးဖမ္းၿပီးအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္တဲ့ တံငါသည္မိသားစုေလးေပါ့။ ႐ူဘီက ေက်ာင္းမသြားခင္ သူ႔အေဖ၊ အစ္ကိုနဲ႔အတူတူ ငါးဖမ္းထြက္ရပါတယ္။ သူက မိသားစုရဲ႕စကားျပန္လည္းျဖစ္ေတာ့ မိဘေတြကသူ႔ကိုအားကိုးၾကတာေပါ့။ ႐ူဘီအထက္တန္းေရာက္ေတာ့ ေတးဆိုအဖြဲ႕တစ္ခုထဲကိုဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ူဘီရဲ႕အသံခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔ပါရမီကို သတိျပဳမိတဲ့ဆရာက သူ႔ကိုေသခ်ာေလ့က်င့္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔႐ူဘီဟာ သူ႔မိသားစုေတြနားမလည္ႏိုင္တဲ့၊ ခံစားလို႔မရတဲ့ သီခ်င္းဆိုတာကို အရမ္းစြဲလမ္းသေဘာက်သြားပါတယ္။ ႐ူဘီတစ္ေယာက္ သူနဲ႔မိသားစုၾကားကကြာဟခ်က္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး သူဝါသနာပါရာ ...
IMDB: 7.9/10 357 votes
Shaadisthan (2021) ##unicode Shaadisthanဇာတ်ကားမှာတော့ Sashaက လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခဲ့တဲ့ မိသားစုတစ်စုဖြစ်ပြီးတော့ တီးဝိုင်းတစ်ခုမှာသီချင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တယ်။တစ်နေ့သူတို့တီးဝိုင်းကို မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဆိုပေးဖို့အကူအညီလာတောင်းတဲ့အတွက် အဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိတဲ့မြို့ကို ခရီးထွက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သတို့သားရဲ့အကူအညီတောင်းမှုကြောင့် လေ‌ယာဉ်လွှတ်သွားတဲ့ သတို့သားဦးလေးတို့မိသားစုကိုပါ သူတို့နဲ့အတူ မင်္ဂလာဆောင်ကို သွားဖို့အတွက် ကားပေါ်တင်ခေါ်လာခဲ့ရတယ်။စည်းကမ်းကြီးတဲ့သတို့သားဦးလေးတို့မိသားစုက Sashaတို့လူငယ်တစ်စု လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်ပုံကို ကြည့်ကာအထင်မြင်သေးနေခဲ့တယ်။Sashaတို့အုပ်စုကလဲ သူတို့ကိုအထင်သေးနေတဲ့ ဒီဦးလေးကိုအမြင်မကြည်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။လမ်းခရီးမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ Sashaက သတို့သားဦးလေးသမီးလေးရဲ့ သနားစရာဖြစ်ရပ်အကြောင်းသိသွားပြီးတော့ ဒီကောင်မလေးကို ကူညီပေးချင်လာပါတော့တယ်။ Sasha တစ်ယောက် ဒီကောင်မလေးကို ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ။ ဒီမိသားစုနဲ့ရော သူတို့ခရီးဆက်သွားဖို့အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Shaadisthanဇာတ္ကားမွာေတာ့ Sashaက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနခဲ့တဲ့ မိသားစုတစ္စုျဖစ္ၿပီးေတာ့ တီးဝိုင္းတစ္ခုမွာသီခ်င္းဆိုတဲ့ေကာင္မေလးျဖစ္တယ္။တစ္ေန႔သူတို႔တီးဝိုင္းကို မဂၤလာေဆာင္မွာ ဆိုေပးဖို႔အကူအညီလာေတာင္းတဲ့အတြက္ အဲ့မဂၤလာေဆာင္ရွိတဲ့ၿမိဳ႕ကို ခရီးထြက္ဖို႔ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သတို႔သားရဲ႕အကူအညီေတာင္းမႈေၾကာင့္ ေလ‌ယာဥ္လႊတ္သြားတဲ့ သတို႔သားဦးေလးတို႔မိသားစုကိုပါ သူတို႔နဲ႔အတူ မဂၤလာေဆာင္ကို သြားဖို႔အတြက္ ကားေပၚတင္ေခၚလာခဲ့ရတယ္။စည္းကမ္းႀကီးတဲ့သတို႔သားဦးေလးတို႔မိသားစုက Sashaတို႔လူငယ္တစ္စု လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနတတ္ပုံကို ၾကည့္ကာအထင္ျမင္ေသးေနခဲ့တယ္။Sashaတို႔အုပ္စုကလဲ သူတို႔ကိုအထင္ေသးေနတဲ့ ဒီဦးေလးကိုအျမင္မၾကည္ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။လမ္းခရီးမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ Sashaက သတို႔သားဦးေလးသမီးေလးရဲ႕ သနားစရာျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းသိသြားၿပီးေတာ့ ဒီေကာင္မေလးကို ကူညီေပးခ်င္လာပါေတာ့တယ္။ Sasha တစ္ေယာက္ ဒီေကာင္မေလးကို ဘယ္လိုကူညီေပးမလဲ။ ဒီမိသားစုနဲ႔ေရာ သူတို႔ခရီးဆက္သြားဖို႔အဆင္ေျပပါ့မလားဆိုတာ ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p ...
99 Songs (2021) ##unicode ဂျေးကငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတကိုဝါသနာထုံတယ်။ သူ့အဖေတားမြစ်ထားတဲ့ကြားကပဲ လစ်ရင်လစ်သလို ဂီတကိုခိုးပြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဂျေးဟာဂီတဘက်မှာ ပါရမီပါပြီး ကောလိပ်မှာလည်း ဂီတအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ထားတယ်။ သူချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးက ဆိုဖီယာတဲ့။ ဆိုဖီယာက စကားမပြောနိုင်ရှာဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကသိပ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်။ ဆိုဖီယာက ချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးကြီးမိသားစုကလာတာ။ သူ့အဖေက ဂျေးကိုသူထောင်ပေးမယ့်ဂီတစီးပွားရေးမှာ ဦးစီးစေချင်တယ်။ ဂျေးက ဂီတကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ ဆက်လုပ်သွားချင်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဂျေးနဲ့ဆိုဖီယာအဖေတို့ အခြေအတင်ဖြစ်ကြပြီး ဆိုဖီယာအဖေက လောကကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ့် သီချင်းအပုဒ် ၁၀၀ ရေးနိုင်မှ သူ့သမီးနဲ့သဘောတူမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ ဂျေးကို စိတ်ကူးဉာဏ်ထက်သန်အောင်ဆိုပြီး သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့ဇာတိရှီလုံဆိုတဲ့မြို့လေးကို ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ ဂျေးကလည်း သီချင်းတွေကိုကြိုးစားပြီး ရေးတော့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရှီလုံမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာတော့ ဂျေးတစ်ယောက် သီချင်းအပုဒ် ၁၀၀ ပြည့်အောင်ရေးပြီး ဆိုဖီယာနဲ့ဆုံစည်းနိုင်မှာလား၊ လောကကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့သီချင်းဆိုတာကရော ရှိနိုင်ပါ့မလားဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရင်း သီချင်းကောင်းလေးများပါ နားဆင်နိုင်မယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ေဂ်းကငယ္စဥ္ကတည္းက ဂီတကိုဝါသနာထုံတယ္။ သူ႔အေဖတားျမစ္ထားတဲ့ၾကားကပဲ လစ္ရင္လစ္သလို ဂီတကိုခိုးၿပီးသင္ယူခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေဂ်းဟာဂီတဘက္မွာ ပါရမီပါၿပီး ေကာလိပ္မွာလည္း ဂီတအဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႕ထားတယ္။ သူခ်စ္ရတဲ့ေကာင္မေလးက ဆိုဖီယာတဲ့။ ဆိုဖီယာက စကားမေျပာႏိုင္ရွာဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကသိပ္ခ်စ္ၾကတဲ့ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္။ ဆိုဖီယာက ခ်မ္းသာတဲ့မ်ိဳး႐ိုးႀကီးမိသားစုကလာတာ။ သူ႔အေဖက ေဂ်းကိုသူေထာင္ေပးမယ့္ဂီတစီးပြားေရးမွာ ...
IMDB: 9.0/10 824 votes
Tuesdays And Fridays (2021) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်ဇာတ်ကားလေးကတော့ နည်းနည်းထူးခြားပါတယ် အချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုပေမယ့်သာမန်မြင်နေကျအချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေနဲ့ နည်းနည်းကွဲထွက်နေပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်း အရာလေးကတော့ စီရာဟာ ငယ်ရွယ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်လည်းကောင်းကောင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ ဗာရွန်ကတော့ အောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပေါ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တွေ့ကြပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ် ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံးဟာမိဘတွေ အိမ်ထောင်ကွဲတာကနေရထားတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် အချစ်ရေးကိုစတင်ဖို့ကြောက်နေကြတာပါ အထူးသဖြင့် ဗာရွန်ဟာသူ့အဖေလိုမျိုး မိသားစုကိုထားခဲ့ပြီး စိတ်ဒဏ်ရာပေးမိမှာကိုအရမ်းကြောက်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲ စီရာဟာ သဘောတူညီချက်တစ်ခုထားလိုက်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့နဲ့ သောကြာနေ့နှစ်ရက်တည်းမှာပဲ ချစ်သူရည်းစားလိုနေဖို့ပါ ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးမှာ ကြောက်စိတ်ကိုကျော်လွှားပြီးချစ်သူတွေဖြစ်သွားမှာလား နှစ်ဦးသားအချစ်ရေးအဆုံးသတ်သွားမှာလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္ဇာတ္ကားေလးကေတာ့ နည္းနည္းထူးျခားပါတယ္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းဆိုေပမယ့္သာမန္ျမင္ေနက်အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ နည္းနည္းကြဲထြက္ေနပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္း အရာေလးကေတာ့ စီရာဟာ ငယ္႐ြယ္ၿပီးေအာင္ျမင္တဲ့ အလုပ္အကိုင္လည္းေကာင္းေကာင္းရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ပါ ဗာ႐ြန္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ေပါ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ေတြ႕ၾကၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္လုံးဟာမိဘေတြ အိမ္ေထာင္ကြဲတာကေနရထားတဲ့စိတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးကိုစတင္ဖို႔ေၾကာက္ေနၾကတာပါ အထူးသျဖင့္ ဗာ႐ြန္ဟာသူ႔အေဖလိုမ်ိဳး မိသားစုကိုထားခဲ့ၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာေပးမိမွာကိုအရမ္းေၾကာက္ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ပဲ စီရာဟာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုထားလိုက္ပါတယ္အဂၤါေန႔နဲ႔ ေသာၾကာေန႔ႏွစ္ရက္တည္းမွာပဲ ခ်စ္သူရည္းစားလိုေနဖို႔ပါ ဒီလိုထူးဆန္းတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေနာက္ဆုံးမွာ ေၾကာက္စိတ္ကိုေက်ာ္လႊားၿပီးခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားမွာလား ႏွစ္ဦးသားအခ်စ္ေရးအဆုံးသတ္သြားမွာလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦး Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Comedy, Musical, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle ...
A Week Away (2021) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ Netflixကနေအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ dance musical အမျိုးအစားဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ အကတွေသီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေလည်းပါပြီး ဇာတ်အိမ်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးမို့ အေးအေးဆေးဆေးကြည့်လို့ ကောင်းမယ့်ဇာတ်ကားလေးပါ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေရဲ့နွေရာသီcamp စခန်းဝင်ကြတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းထဲမှာဝယ်လ်ကမိဘမဲ့ဖြစ်ပြီး ဆိုးသွမ်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့သူ့ကို မိန်းမတစ်ယောက်ကသူ့သားနဲ့အတူ campဝင်ဖို့အတွက်လာခေါ်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့သူတို့campကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ဝယ်လ်ကသူ့ကိုယ်သူမိဘမဲ့ဆိုပြီးပြောရမှာရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့အကြောင်းတွေကိုလိမ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ် Campမှာလူငယ်လေးတွေကစားကြတာတွေ ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ကြတာတွေကိုလည်းကြည့်ရူရမှာပါ အချစိဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်းပါတယ် ဝယ်လ်တစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ သီချင်းကောင်းတွေလည်းပါလို့ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားအဖြစ်ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ် ##zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ဇာတ္ကားေလးကေတာ့ Netflixကေနအသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ dance musical အမ်ိဳးအစားဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါ အကေတြသီခ်င္းေကာင္းေကာင္းေလးေတြလည္းပါၿပီး ဇာတ္အိမ္ကလည္းေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးမို႔ ေအးေအးေဆးေဆးၾကည့္လို႔ ေကာင္းမယ့္ဇာတ္ကားေလးပါ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးေတြရဲ႕ေႏြရာသီcamp စခန္းဝင္ၾကတဲ့အေၾကာင္းကိုအေျခခံ႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဝယ္လ္ကမိဘမဲ့ျဖစ္ၿပီး ဆိုးသြမ္းတဲ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ပါ တစ္ေန႔သူ႔ကို မိန္းမတစ္ေယာက္ကသူ႔သားနဲ႔အတူ campဝင္ဖို႔အတြက္လာေခၚခဲ့ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔သူတို႔campကိုေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္ ဝယ္လ္ကသူ႔ကိုယ္သူမိဘမဲ့ဆိုၿပီးေျပာရမွာရွက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔အေၾကာင္းေတြကိုလိမ္ၿပီးေျပာခဲ့ပါတယ္ Campမွာလူငယ္ေလးေတြကစားၾကတာေတြ ၿပိဳင္ပြဲေတြၿပိဳင္ၾကတာေတြကိုလည္းၾကည့္႐ူရမွာပါ အခ်စိဇာတ္လမ္းေလးေတြလည္းပါတယ္ ဝယ္လ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ဇာတ္လမ္းလည္းဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ သီခ်င္းေကာင္းေတြလည္းပါလို႔ၾကည့္လို႔ေကာင္းမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားအျဖစ္ၫႊန္းေပးလိုက္ရပါတယ္ review – Hmue File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama, Family, Musical Subtitle : Myanmar Subtitle (hardsub) Translated by Hmue Encoded by Arrow
Caught byaWave (2021) ##unicode ဒီတစ်ခါကတော့ Netflix ကတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ အီတလီအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဆာရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးက နွေကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ရွက်လှေသင်တန်းတက်ရင်း လိုရန်ဇိုဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ သိကျွမ်းပြီးချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆာရာမှာ ကုသနည်းမပေါ်သေးတဲ့ ကြွက်သားချို့ယွင်းတဲ့ရောဂါရှိပါတယ်။ ရွက်လှေသင်တန်းမှာ သူ့ရောဂါအခြေအနေက ပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ဆာရာရဲ့ရောဂါအခြေအနေကိုရော လိုရန်ဇိုက နားလည်ပေးနိုင်ပါ့မလား၊ ဆာရာကိုစိုးရိမ်လို့ထိန်းချုပ်ကြမယ့် သူ့မိဘတွေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေး ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ၊ ဆာရာရဲ့ရောဂါကရော ပျောက်ကင်းသွားမှာလားဆိုတာကို ခံစားကြရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ အေးအေးလေးနဲ့ကို ဆက်ကြည့်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့၊ ဇာတ်သိမ်းသွားရင်လည်း ရင်ထဲစွဲနေစေမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါကေတာ့ Netflix ကတင္ဆက္ေပးထားတဲ့ အီတလီအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ဆာရာဆိုတဲ့ေကာင္မေလးက ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ ႐ြက္ေလွသင္တန္းတက္ရင္း လိုရန္ဇိုဆိုတဲ့ေကာင္ေလးနဲ႔ သိကြၽမ္းၿပီးခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆာရာမွာ ကုသနည္းမေပၚေသးတဲ့ ႂကြက္သားခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ေရာဂါရွိပါတယ္။ ႐ြက္ေလွသင္တန္းမွာ သူ႔ေရာဂါအေျခအေနက ပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ဆာရာရဲ႕ေရာဂါအေျခအေနကိုေရာ လိုရန္ဇိုက နားလည္ေပးႏိုင္ပါ့မလား၊ ဆာရာကိုစိုးရိမ္လို႔ထိန္းခ်ဳပ္ၾကမယ့္ သူ႔မိဘေတြနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ေရး ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ၾကမလဲ၊ ဆာရာရဲ႕ေရာဂါကေရာ ေပ်ာက္ကင္းသြားမွာလားဆိုတာကို ခံစားၾကရမယ့္ဇာတ္လမ္းေလးပါ။ ေအးေအးေလးနဲ႔ကို ဆက္ၾကည့္ခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့၊ ဇာတ္သိမ္းသြားရင္လည္း ရင္ထဲစြဲေနေစမယ့္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ review – Yue Liang File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p ...
The Prom (2020) ##unicode ဒီကားမှာတော့ LGBTတွေရဲ့ Equalityအတွက် ရိုက်ပြထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ Emmaက Indianaဆိုတဲ့ပြည်နယ်က အထက်တန်းကျောင်းတက်နေတဲ့ Lesbianကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ကျောင်းကပွဲကို သူမကောင်မလေးကို ခေါ်လာဖို့ကို မိဘဆရာအဖွဲ့အစည်းက ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းကပွဲကိုပါ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ Indianaက LGBT တွေကိုလက်မခံတာကြောင့် Emmaတစ်ယောက်ခက်ခဲမှုတွေကို တစ်ယောက်တည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းက Twitterပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Broadway starsတွေဖြစ်တဲ့ DeeDeeနဲ့ Barryတို့အဖွဲ့ ကတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ DeeDeeနဲ့ Barryက အရင်ကနာမည်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လူထုပုံရိပ်က မကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့လုပ်တဲ့ရှိုးကလဲ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ Angieကလဲ အမြဲနောက်ခံသီချင်းဆိုနေရတဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်ပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးမရနေသူဖြစ်တယ်။Trentကတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး လူတိုင်းသိတဲ့အထိနာမည်ကြီးခဲ့ပေမဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေအရ စားပွဲထိုးဝင်လုပ်နေခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ Broadway starsအဖွဲ့က သူတို့ကိုလူမြင်ကောင်းအောင်လို့ Emmaရဲ့ပြသာနာကို ကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး Indianaကိုခရီးထွက်ကြပါတော့တယ်။ Broadway starsအဖွဲ့က Indianaက မိဘဆရာအဖွဲ့အစည်းကို LGBT တွေကိုလက်ခံလာနိုင်အောင်စည်းရုံးနိုင်ပြီး Emmaကိုကျောင်းကပွဲသွားလို့ရအောင် ကူညီနိုင်မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi ဒီကားမွာေတာ့ LGBTေတြရဲ႕ Equalityအတြက္ ႐ိုက္ျပထားတဲ့ကားေလးျဖစ္ပါတယ္။ Emmaက Indianaဆိုတဲ့ျပည္နယ္က အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ Lesbianေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ေက်ာင္းကပြဲကို သူမေကာင္မေလးကို ေခၚလာဖို႔ကို မိဘဆရာအဖြဲ႕အစည္းက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းကပြဲကိုပါ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ Indianaက LGBT ေတြကိုလက္မခံတာေၾကာင့္ Emmaတစ္ေယာက္ခက္ခဲမႈေတြကို ...
IMDB: 6.0/10 2,092 votes
Jingle Jangle: A Christmas Journey (2020) IMDB - 6.8/10 ##unicode ဒီကားကတော့ 13ရက်နေ့က Netflix ကနေထွက်လာတယ့် Fantasy, Musical ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းပါ။ ပုံပြင်ထဲမှာ ကလေးကစားစရာတွေ တီထွင်ဖန်တီးတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တီထွင်မှုတွေကြောင့် သူ့အရုပ်ဆိုင်လေးဟာ နာမည်ရလာခဲ့တယ်၊ သူ့ဇနီး၊ သမီးလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့အလုပ်သင်က သူ့ရဲ့တီထွင်မှုစာအုပ်ကို ခိုးယူသွားတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာပိုင်ဆိုင်ထားသမျှအားလုံးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး နလန်ပြန်မထူနိုင်တော့ပါဘူး၊ ယုံကြည်ချက်တွေလည်း ပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တယ် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီး သူ့မြေးလေးက သူ့အတွက်ယုံကြည်မှုတွေတစ်ဖန်ပြန်ရှိလာအောင် လုပ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တွေ ပြန်ထွက်လာပါဦးမလားဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ခံစားပေးပါဦး... ကြည့်ရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ တစ်ခုခုကိုတော့ ခံစားမိပါလိမ့်မယ် ##zawgyi ဒီကားကေတာ့ 13ရက္ေန႔က Netflix ကေနထြက္လာတယ့္ Fantasy, Musical ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္အေၾကာင္းပါ။ ပုံျပင္ထဲမွာ ကေလးကစားစရာေတြ တီထြင္ဖန္တီးတဲ့လူတစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ သူ႔ရဲ႕ထူး​ျခားတဲ့တီထြင္မႈေတြေၾကာင့္ သူ႔အ႐ုပ္ဆိုင္ေလးဟာ နာမည္ရလာခဲ့တယ္၊ သူ႔ဇနီး၊ သမီးေလးနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေပါ့ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕အလုပ္သင္က သူ႔ရဲ႕တီထြင္မႈစာအုပ္ကို ခိုးယူသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ သူဟာပိုင္ဆိုင္ထားသမွ်အားလုံးကို ဆုံးရႈံးလိုက္ရၿပီး နလန္ျပန္မထူႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါေတာ့တယ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီး သူ႔ေျမးေလးက သူ႔အတြက္ယုံၾကည္မႈေတြတစ္ဖန္ျပန္ရွိလာေအာင္ လုပ္ဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ေတြ ျပန္ထြက္လာပါဦးမလားဆိုတာကို ဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာ ခံစားေပးပါဦး... ၾကည့္ရတာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးနဲ႔ တစ္ခုခုကိုေတာ့ ခံစားမိပါလိမ့္မယ္ Review – ...
Clouds Clouds (2020) =================== October 16 ရက်နေ့ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Zach ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ် ဘဝအကြောင်းကို အဓိကထားရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းကြာမြင့်ချိန်က ၂ နာရီ ဖြစ်တာမို့ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ပျော်ရွှင်မှု ဝမ်းနည်းမှုစတဲ့ ရသနှစ်မျိုးလုံးကို ခံစားရမှာပါ။ Zach ဟာ အရိုးကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ၊ ကင်ဆာရောဂါဒဏ်ကြောင့် သူ့ခေါင်းမှာ ဆံပင်လဲမရှိပါဘူး၊ ခြေထောက်တွေကလည်း မသန်တဲ့အတွက် ချိုင်းထောက်နဲ့ ကျောင်းတတ်ရပါတယ်။ Sammy ကတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းပါ၊ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး သီချင်းဆိုရတာကို ဝါသနာပါကြတယ်၊ တစ်နေ့မှာ Zach ရဲ့ရောဂါ ပြန်ဖောက်လာလို့ ဆေးရုံသွားပြတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့ကင်ဆာရောဂါ နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ၇ လလောက်ဘဲ အသက်ရှင်ဖို့အာမခံနိုင်မယ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာတော့ Zach အရမ်းဝမ်းနည်းခဲ့တယ်။ သူ့ချစ်သူ Amy အပါအဝင် မိသားစုဝင်တွေရော သူငယ်ချင်းတွေရော သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်၊ သေရတော့မှာကို ...